Triveni Digital သည် ၂၀၁၅ IEEE ရုပ်သံလွှင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ATSC 3.0 သင်ကြားပို့ချမှုအစည်းအဝေးကို ဦး ဆောင်မည် NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 3.0 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ATSC 2015 သင်ခန်းစာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပို့ဆောငျဖို့ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်
3.0 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ATSC 2015 သင်ခန်းစာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပို့ဆောငျဖို့ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်
Princeton, NJ - စက်တင်ဘာ 29, 2015 - Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် ယနေ့က၎င်း၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သိပ္ပံအရာရှိနှင့် ATSC ရဲ့နည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ (TG3) ၏ကုလားထိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဒေါက်တာရစ်ချတ် Chernock, အ 3.0 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ATSC 2015 အပေါ်တစ်ဦးသင်ခန်းစာ session ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီ session 15 မှာအောက်တိုဘာ 8 အပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်: Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် Carib Royale မှာ 30 နံနက်။ session ကိုကုလားထိုင်နှင့်အမျှ Chernock သစ်ကိုစံနှင့်မည်သို့သက်ရောက်မှုထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာကိုအပ်သည်လမ်းပေါ်တင်ပြချက်များတစ်စီးရီးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
"ATSC 3.0 ကြည့်ရှုသူများအတွက်တစ်ဦးထက်သာလွန်ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံကိုပေးသူတို့ကိုဖွင့်, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းရည်၏ကျယ်ပြန့်အသစ်တစ်စုံမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ" ဟု Chernock ကဆိုသည်။ "ဒီသင်ခန်းစာ session ကိုသစ်ကိုစံ၏အမျိုးမျိုးသောအလွှာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတင်ဆက်သူတစ်ဦးချင်းစီအလွှာတွင်ပါဝင်သောနည်းပညာမှာအနီးကပ်ကြည့် ယူ. ထုတ်လွှင့်အသိုင်းအဝုိင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ ထို့အပြင်ကြှနျုပျတို့သညျဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုစံထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ငွေရှာခြင်းအတွက်ဖွဘယ်လိုဆွေးနွေးကြမည်သည့်ကာလအတွင်း ATSC 3.0 ၏အထွေထွေခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါသင်ခန်းစာ session တစ်ခု ATSC 3.0 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တက်ကြွစွာတင်ပြဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများအမျိုးမျိုးထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ NAB ၏ Pizzi ထံမှ ATSC 3.0 နဲ့လုကာ Fay ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါလိမ့်မယ် Skip Sony က အဆိုပါ ATSC 3.0 physical layer သည်ဆှေးနှေးပါမညျ။ Madeline Noland, LG Electronics ၏ကိုယ်စားပြုသည် ATSC 3.0 applications များနှင့်တင်ဆက်မှုအလွှာအပေါ်အလင်းပစ်ပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာ Samsung မှ Youngkwon Lim က ATSC 3.0 စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် protocol များအလွှာအပေါ်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အရပျကိုယူပြီးအောက်တိုဘာ 13-16, အ 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအသံလွှင့်နည်းပညာအပေါ်ကမ္ဘာ့ဉီးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့အဖြစ်အပျက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လဲ tutorial နှင့်အတူတက်ရောက်ကာ, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်မီနှင့်သိကောင်းစရာများသုံးရက်ကြာအစီအစဉ်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်သူစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် အဆိုပါ ATSC 3.0 စံများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသိသိသာသာအရင်းအမြစ်များကိုခွငျး, နည်းပညာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ပေါ်နေသော၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်ဆက်လက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားမှုအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့, ဝင်ငွေ-ထုတ်လုပ်န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုပေးလုပ်ပိုင်ခွင့်။
ယင်းကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် bts.ieee.org/broadcastsymposium/။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် www.TriveniDigital.com.
အကြောင်းအရာ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် သူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုဖို့ပိုကောင်းအစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ထုတ်လွှင့် enable ပြုလုပ်စနစ်များကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်'' s ကိုပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်နှင့် metadata စီမံခန့်ခွဲမှု, ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်း, ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးအာမခံချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များဟာသူတို့ရဲ့လွယ်ကူခြင်းအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ကြသည်။ ဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်နှင့်အလုပ်လုပ်, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားစျေးကွက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ-compliant ချဉ်းကပ်လုပ်ကိုင်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.TriveniDigital.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/TriveniDigital/TriveniDigital-Richard_Chernock.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် CSO ကဒေါက်တာရစ်ချတ် Chernock
လိုက် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်:
Facebook က: www.facebook.com/pages/Triveni-Digital/137957436263401
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/32484?trk=tyah
ATSC 3.0 ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကို IEEE isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-09-29
ယခင်: DTT ဖို့အိုင်ဗရီကို့စ်ရဲ့အကူးအပြောင်းမှုအတွက်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယို Network Solutions ပါဝါဗီဒီယို Headend ရှေ့ပြေး
နောက်တစ်ခု: DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအဆိုပါစာရင်းကိုင်များအတွက် Up ကိုကိုက်ညီ